Real Madrid oo dalab qaali ah u bandhigeysa kooxda Paris St Germain si ay kaga hesho Edison Cavani – Gool FM
Barcelona oo dhibaato kala kulmi doonta diiwaangelinta Dembele ee horyaalka La Liga
Halyeey kooxda AS Roma ah oo si layaab leh u sheegay kooxda xigta ee Cristiano Ronaldo
Gabriel Jesus oo laga helay muuqaal sir ah isaga oo xirran lambarka uu u qaadan doono kooxdiisa cusub ee Arsenal
Tottenham oo heshiis la gaartay Everton si ay ula soo wareegto Richarlison
Halyeeyga Liverpool ee Hamann oo Guardiola uga digay Haaland
Ten Hag oo qorsheynaya u dhaqaaqista saxiixa mid ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan Premier League
Xavi iyo Lewandowski oo ku kulmay jasiiradda Ibiza
Chelsea oo wadahadalo la yeelan doonta wakiilka Raphinha si loo dhammeystiro heshiiska
Yaya Touré oo magacaabay xiddig u qalma inuu mar uun ku guuleysto Ballon d’Or
Muxuu ka yiri Darren Bent heshiiska uu De Jong ugu biirayo Manchester United??
Real Madrid oo dalab qaali ah u bandhigeysa kooxda Paris St Germain si ay kaga hesho Edison Cavani
Dajiye July 26, 2018
(Real Madrid) 26 Luulyo 2018. Real Madrid ayaa bixin doonta dalab weyn oo ay ku dooneyso weeraryahanka kooxda Paris St Germain Edison Cavani inta lagu jiro suuwan xagaagan. Sida ay baahiyeen warbaahinta dalka Spain.
Weeraryahanka kooxda Paris St Germain ayaa dhawaanahan bartilmaameed u ahaa Real Madrid si ay kaga dhigato badalka Cristiano Ronaldo oo kaga dhaqaaqay Juventus.
Edinson Cavani ayaa dhaliyay 40 gool 48 kulan oo uu saftay kooxda Paris St Germain tartamada oo dhan xilli ciyaareedkii hore. Xili sidoo kale bandhig fiican uu ka sameeyay koobka aduunka 2018 ee dhawaan lagu soo xidhay dalka Russia.
Wargeyska “AS” ayaa maanta oo khamiis ah sheegay in Edison Cavani uu si weyn u soo dhaweeyay inuu u dhaqaaqo kooxda cad cadka ee Real Madrid inta lagu jiro suuqan xagaaga
Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in Real Madrid ay diyaar la tahay in kooxda Paris St Germain ay u bandhigto aduun dhan 100 million euros, si ay kaga hesho saxiixa Edison Cavani maalmaha soo aadan.
David Silva oo ka hadlay xiliga uu ka tagi doono kooxda Manchester City
Waa SHAX cajiib ah oo kulmisay xiddigo waa wayn, laakiin Gadigood Bilaash ayaa lagu heli karaa... (Yaad kooxdaada la dooneysaa?) + SAWIRRO